MOFONAINA NY 18 OKTOBRA 2017. IIMpanj 20:1-7 | Ma vie en abondance
Fiadanana sy fahasambarana no nomanin’Andriamanitra ho anao
IREO FOMBA TSOTRA HAMPAHOMBY NY FIAINANAO
omen’i Jesoa fahefana aho
Comment gagner de l’argent avec…
MOFONAINA NY 18 OKTOBRA 2017. IIMpanj 20:1-7
Posté le 18 octobre 2017 par abondance dans spiritualité
Nampahafantarin’Andriamanitra an’i Hezekia fa hahafaty azy NY aretiny. Vao maika nampitodika an’i Hezekia tamin’Andriamanitra ny fahafantarany izany. Olona nanana firaisam-po tamin’Andriamanitra tokoa i Hezekia ka anisan’ny antoka nampahery vavaka azy izany. Ary izany no vatsy ho antsika indray amin’ity anio.
MAHERY VAVAKA NY VAVOLOMBELONA MARINA
1- MANOME LANJA NY FIJERIN’ANDRIAMANITRA NY TENANY (1-3)
II Mpanjaka 20 : 3. Hoy Hezekia: « Jehovah o, enga anie ka hotsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin’ny fahamarinana sy tamin’ny foko rehetra ary ny nanaovako izay tsara eo imasonao. Dia nitomany mafy dia mafy izy. »
Fomba fiteny sy fisainana tsy dia mahazatra izany nataon’i Hezekia izany. Ary toa mifanohitra amin’ny toetra takin’Andriamanita amin’ny olona aza izany. Toa teny manandra-tena sy manamarin-tena. Tsy fanamarinan-tena velively anefa izany, fa milaza ny fomba fijerin’Andriamanitra ny mpanompony kosa. Tena olo-marina tokoa mantsy i Hezekia, araka ny voalaza ao amin’ny 18: 3 hoe: « Ary nanao izay mahitsy eo imason’i Jehovah izy tahaka izay rehetra nataon’i Davida rainy. ». Ary mampahatsiahy izany i Hezekia eto. Ilay Andriamanitra mpamindra fo sy tsara mantsy dia manome lanja. ny tsara kely vitan’ny olona mihoatra amin’ny ratsy vitany. Raha ny faharatsian’ny olona sy ny fahotany no tanisaina dia vitsy ihany no voavonjy na tsy misy mihitsy. Saingy rehefa nanapa-kevitra handeha amin’ny fahamarinana sy handeha amin’ny fahamarinana i Hezekia dia zava-dehibe teo anatrehan’Andriamanitra izany; ka nahatonga an’Andriamanitra hanasitrana indray an’i Hezekia na dia tokony hahafaty azy aza ny aretiny.
Ry havana, voleo ho tonga finoana ao anatintsika koa io fijerin’Andriamanitra antsika mpanompony io, mba ho olona mahery vavaka koa isika. Omeo lanja ny fijerin’Andriamanitra ny tenanao fa hiova ny fomba fijerinao ny tenanao. Toy izao mantsy ny fomba fijerin’Andriamanitra anao io: Isaia 43 : 4. « Satria malala eo imasoko ianao, eny, be voninahitra ianao sady tiako ». Tiany, malalany, be voninahitra, saro-bidy, manan-danja, ilainy, nohariany araka ny sitrapony. Koa satria ireo no toerana nametrahan’Andriamanitra, aoka ampiasaina amin’izay hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra izany.
2) IZAY TENA MIAINA AMIN’NY FAHAMARINANA (3)
Amim-pahasahiana no nitenenan’i Hezekia fa mandeha amin’ny fahamarinana izy, ny fony manontolo no nanompoany an’Andriamanitra, ary nanao ny tsara teo imason’Andriamanitra. Tsy mba fireharehana io fa ny tantaran’i Hezekia manontolo dia manamarina io toetrany miaina amin’ny fahamarinana sy manao ny tsara eo anatrehan’Andriamanitra io. Io no anisan’ny antony namalian’Andriamanitra ny vavaka nataony. I Jesoa dia olo-marina sy niaina mandrakariva tamin’ny fahamarinana. Vokany dia nahery ny vavaka rehetra nasandrany teo anatrehan’ilay Andriamanitra Rainy. Satria Andriamanitra marina ny Andriamanitra ivavahantsika dia mitaky antsika hiaina fahamarinana Izy mba handrenesany ny vavaka ataontsika. Mahery vavaka ny vavolombelona marina izay tena miaina ny fahamarinana. Hoy mantsy ny Ohabolana 15 : 29. hoe: « Jehovah dia lavitra ny ratsy fanahy; Fa ny fivavaky ny marina no henoiny ». Ary hamafisin’i Jakoba izany manao hoe: « Koa mifaneke heloka ianareo, ary mifampivavaha, mba ho sitrana ianareo. Ny fiàsan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra ».
Amin’izao andro farany izao dia vitsy ny olona sahy mijoro amin’ny fahamarinana. Hany ka tsy hita intsony ny herin’ny vavaka. Satria na ny eritreriny manenjika azy fotsiny dia antoka tsy hahatonga ny fangatahany amin’Andriamanitra. Ny vavaka mantsy mitaky fo madio sy sy saina milamina tony sy feno fiadanana.
Ry havana, aza miandry efa misy zavatra ilaina sy angatahina amin’Andriamanitra vao mifona sy mibebaka. Fa ataovy fiainana isan’andro tahaka ny rivotra mivezivezy miditra eo amin’ny vavoronao mba hamelona anao ny fiainana amin’ny fahamarinana. Amin’ny sehatra rehetra sy ny toerana rehetra misy anao dia anjakan’ny fahamarinana satria misy anao ilay vavolombelona marina. Ny tokantano misy anao, ny biraonao, ny Fiangonana misy anao, ny fiaraha-monina misy anao sns dia anjakan’ny fahamarinana.
3) MAHAZO MIHOATRA NOHO IZAY ANGATAHINA (4-7)
Ny zavatra hita eto, toa tsy nahateny akory i Hezekia. Fa ranomaso sy tomany no nanehoany ny fangatahany. Fa ny valin’izany avy tamin’Andriamanitra dia hoe: II Mpanjaka 20 : 5. » indro, hahasitrana anao Aho… 6. Ary hampiako dimy ambin’ny folo taona ny andronao; sady hamonjy anao sy ity tanàna ity amin’ny tanan’ny mpanjakan’i Asyria Aho; ary hiaro ity tanàna ity Aho noho ny amin’ny tenako « . Araka izany, dia nomen’Andriamanitra azy ny fahasitranana nampiana tombon’andro lava hahavelomana ary tombon’andro feno filaminana sy fandriam-pahalemana, tsy misy ady.
Mahery vavaka ny vavolombelona marina ka mahazo mihoatra noho izay angatahina. Satria ilay Andriamanitra mihitsy nom mpanome mihoatra noho izany angatahintsika. (Efesiana 3 : 20. Ary ho an’izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika).Ry havana, izao nataon’Andriamanitra tamin’ny Hezekia izao koa dia azony atao aminao. Fa aoka kosa hatao faka tahaka ny toetran’i Hezekia ao amin’ny 18:3 sy 20:3. Ary ireto no manamafy ny fihoaran’ny valim-bavaka ka aoka hatao zava-dehibe: Ny Fahatsaran’ny fifandraisana amin’Andriamanitra (and.2-5), Ny Fiarovan’Andriamanitra ny voninahiny (and.6), Ny Fanaovana ny asa tokony hatao.
Mahery vavaka koa isika ry havana, raha manome lanja ny fomba fijerin’Andriamanitra antsika. Koa raiso ho fomba fiainantsika ny fomba fijerin’Andriamanitra antsika. Ary mahazo mihoatra noho izay angatahina. Koa mivavaha ka aza mitsahatra.
Raha misy fanontaniana dia apetraho etsy ambany fa ho valianay am-pitiavana.
MA VIE EN ABONDANCE
Mahaiza mandray fanapahan-kevitra
NY FOMBA HANANANA FIADANANA
Ny tena fahombiazana
MOFONAINA ALATSINAINY 23 OKTOBRA 2017. ASAN’NY APOSTOLY 4:23-31.
MOFONAINA NY SABOTSY 21 OKTOBRA MATIO 26: 40-46
RABETRANO Corine Sylvie dans Bonjour tout le monde
argentfacil1 dans Bonjour tout le monde
Isika no tompon’ny Fanapahan-kevitra Salamo 145 : 5. Ny lazan’ny voninahitry ...
NY FIADANANA DIA AVY AMIN’NY FAHAIZA-MIFALY AMIN’IZAY EFA ANANANA. Ny hoe ...
Ny tena fahombiazana dia zavatra tsotra Matio 16 : 26. Fa ...
MOFONAINA ALATSINAINY 23 OKTOBRA 2017. ASAN’NY APOSTOLY 4:23-31. MAHERY VAVAKA NY ...
MOFONAINA NY SABOTSY 21 OKTOBRA. Matio 26 : 40. Ary nankeo amin’ny mpianatra Izy ...
MOFONAINA NY ZOMA 20 OKTOBRA 2017. SALAMO 65:1-8
Salamo 65:1-8 And1: Salamo 65 : 1. »Ho anao ny fanginana ...
- fiadanana sy fahasambarana
BIENVENUEMES CHER(E)S AMI(E)S. Vous ëtes ici. Je crois bien que vous avez besoin d’une ...
BESOIN D’UNE VIE EN ABONDANCE
Que la paix soit avec vous. Je sais que vous avez ...
MOFONAINA NY ALAROBIA 19 OKTOBRA 2017. SALAMO 39:6-13
Salamo nataon’i Davida, nanehoany fa mandalo izao fiainana izao. Manoloana ...
Nampahafantarin’Andriamanitra an’i Hezekia fa hahafaty azy NY aretiny. Vao maika ...
Mofonaina anio Talata 17 Oktobra 2017. Lioka 18: 1-8
MAHERY VAVAKA NY VAVOLOMBELONA MARINA Ny hoe : mahery vavaka dia ...
Faly mandray anao
Faly miarahaba anao tongasoa eto amin’ity pejy ity! Tonga eto ianao; ...
© 2019 Ma vie en abondance Tous droits réservés.